Phoe Kar (ဖိုးကာ) - Toe Toe Lay Pyaw Par (တိုးတိုးလေးပြောပါ) [2012 Album] (128Kbps!) - Mg Shan Lay
Home Album ဖိုးကာ Phoe Kar (ဖိုးကာ) - Toe Toe Lay Pyaw Par (တိုးတိုးလေးပြောပါ) [2012 Album] (128Kbps!)
Phoe Kar (ဖိုးကာ) - Toe Toe Lay Pyaw Par (တိုးတိုးလေးပြောပါ) [2012 Album] (128Kbps!)
9:34:00 AM Album, ဖိုးကာ,
မျှော်လင့်ခြင်း . . .တစ်သက်သာ
ညစဉ် . . .ညတိုင်း